Kismaayo News » Doorashadii Somaliland oo nabad ku dhacday
Doorashadii Somaliland oo nabad ku dhacday
Kn: Doorashii madaxweynaha Somaliland ayaa si nabad ah ku soo gabagabowday kadib markii shalay 21 degmo ay dadweynuhu cod kooda ka rideen.
Walow ay taageerayaasha Xisbiyada Wadani iyo Kulmiye uu mid kastaayi goonidiisa ugu dabaal dagayo inay guushu raacday dhinacooda ayaa hadana gudiga doorashooyinka oo saxaafadda la hadlay ay sheegeen inuusan wali jirin gunaanad ku aadan dhinaca cod tirinta taasina ay meesha ka saarayso sheegashooyinka guulaha loo dabaal dagayo.
Gudigu wuxuu sheegay in sanaadiiqdii degmooyinka dhamaan tood la soo xareeyay ayna maalmo qaadan doonto tirintoodu, waxayna dadka uga digeen borobogaanka ku aadan hebel baa guulaystayda oo tashwiish iyo khalkhal ku abuuri karta xasiloonida Somaliland, waxayna booriyeen inaan laga hor dhicin inta natiijada kama danbaysta ah ay yaacinayso gudiga doorashooyinka.
Guud ahaan doorashadu waxay u dhacday si nabad ah, waxaase wali walaac laga qabaa oo dadka qaarkii wadnaha farta ugu hayaa aqbalaadda Xisbiga laga guulaysto marka natiijada ay shaaciyaan gudiga doorashooyinku. Hadiise walaacaasi meesha ka baxo oo si nabad ah uu qofka guulaystaayi xilka kula wareego, markaasi Somaliland waxay xaqiijinaysaa meeqaamka muraayadda dimuqraadiyadda Geeska Afrika, si taasi u dhacdana waxaa looga baahanyahay shacabka iyo siyaasiyiinta reer Somaliland inay ilaaliyaan amaanka iyo xasiloonida.